Biza ukuba uthathe isenzo: Yintoni i-CTA? Unokuyiphucula njani indlela asebenza ngayo?
Biza ukuba uthathe isenzo: Yintoni i-CTA? Yandisa i-CTR yakho!
NgeCawa, Agasti 7, 2016 NgoLwesihlanu, Agasti 12, 2016 Douglas Karr
Kubonakala kucacile xa ubuza umbuzo, Yintoni uMnxeba wokuSebenza okanye i-CTA, kodwa ihlala ithuba eliphosakeleyo okanye ithuba lokuxhatshazwa ukuqhuba abafundi, abaphulaphuli kunye nabalandeli nzulu ekuzibandakanyeni negama lakho.
Yintoni umnxeba wokuthatha isenzo?
Ukutsala umnxeba kwisenzo kuqhelekile njengommandla wesikrini oqhuba umfundi ukuba acofe ukuze azibandakanye nefutha ngophawu. Ngamanye amaxesha ngumfanekiso, ngamanye amaxesha liqhosha nje, ngamanye amaxesha icandelo eligciniweyo le-asethi yedijithali. Ayizizo iisayithi kuphela ezinokuba nefowuni yokuthatha amanyathelo, phantse lonke uhlobo lomxholo lunakho (kwaye uninzi kufanele).
Kwintetho yokugqibela endiyenzileyo kumsitho wonxibelelwano lwasekhaya, ndacebisa abantu ukuba babhalisele incwadana yasimahla ngokuthumela imiyalezo ebhaliweyo urhwebo ukuya ku-71813 - an umnxeba osebenzayo kwisenzo Kuba isihloko besifanelekile kwaye wonke umntu uneefowuni eziphathwayo ziluncedo ngexesha lokuthetha. Sibonile impendulo engcono kwezi ngaphandle kokucela abantu ukuba baye kule ndawo kwaye babhalise.
IiWebinars zinakho (kwaye kufanele) ukuba zibe nefowuni yokuthatha amanyathelo, ii-infographics kufuneka zisebenze ngokufanelekileyo umnxeba kwisenzo (Isimanga sinikwe umzekelo ongezantsi ophulukene nethuba lombhali!), kunye neenkcazo-ntetho kufuneka nazo. Umntu endisebenza naye uhlala enikezela ngesisa simahla ngokutshintshiselana ngamakhadi oshishino xa ebesenza intetho yakhe-esebenza kamnandi. Ukutyhala umntu ekukhupheleni, ukubhalisa, ukufowunela umnxeba, okanye nelinye inqaku elifanelekileyo kunokuba zii-CTA ezilungileyo.
Ngaba yonke into ifanele ukuba ibe noMnxeba wokuSebenza?
Awuyi kufumana iziqwenga ezininzi zomxholo esivelisayo awunalo umnxeba wentsebenzo, kodwa sabelana ngetoni yomxholo ngaphandle kwawo. Ayisiyiyo yonke into oyenzayo ekufuneka uzama ukuyithengisa, ezinye zazo kufanele ukuba zizama ukwakha ukuthembana kunye negunya ngezikhokelo kunye nabathengi. Soloko uthengisa inokuba yimantra kwiindlela ezininzi zokuthengisa kunye nezentengiso, kodwa ukuthengisa kunokuba yinto ebonakalayo kwezinye iincoko. Umgaqo wam wesithupha uthi soloko unefowuni yokuSebenza xa injongo yakho kukukhuthaza umntu ukuba enze uthethathethwano olunzulu.
Uyenza njani iifowuni eziSebenzayo zokuSebenza
Kukho iindlela eziqinisekisiweyo zokuhambisa iifowuni ezisebenzayo kwisicwangciso samanyathelo. Nazi ezinye zazo:
Gcina iifowuni zakho kwisenzo zibonakala kakhulu Ukubekwa kwee-CTA kufuneka kube kufutshane okanye kuhambelane nokugxilwa komfundi. Sihlala sibeka ii-CTA ngasekunene komxholo esiwubhalayo ukuze ababukeli bashukumise iliso lendalo. Singazenza ukuba zibatyhalele ngakumbi kumjelo womxholo ukuze bathathe inotshi kwixa elizayo. Ezinye iisayithi zidada i-CTA ukuze xa umfundi eskrola, i-CTA ihlala kunye nabo.
Gcina iifowuni zakho kwisenzo esilula Nokuba ngumfanekiso okanye unikezelo kwintetho yakho, ukuqinisekisa ukuba imiyalelo ilula, kwaye indlela yokuzibandakanya kulula iya kuqinisekisa inani eliphezulu labaphulaphuli bakho eliza kubiza, okanye ucofe isenzo osicelileyo. I-CTA esekwe kumfanekiso ihlala ine
Gcina intshukumo icacile kwi-CTA yakho. Sebenzisa amagama esenzo njengokufowuna, ukhuphelo, ucofe, ubhalise, uqalise, njl njl. Ukuba yi-CTA esekwe kumfanekiso, uya kuzifumana rhoqo kwiqhosha elihluke kakhulu. Abasebenzisi beWebhu bafundisiwe ukucofa amaqhosha, ke umfanekiso ubhalisa ngokuzenzekelayo njengomsebenzi ekufuneka bewenzile.
Yongeza Imvo yongxamiseko - Ngaba ixesha liyaphela? Ngaba isithembiso siphelelwa? Ngaba zimbalwa izihlalo? Nantoni na enokunceda ukweyisela umfundi ukuba athathe inyathelo ngoku endaweni yamva iya kunyusa izinga lokuguqula kwakho. Ukongeza imvo yongxamiseko yeyona nto ibalulekileyo kuyo yonke i-CTA.
Push Izibonelelo ngaphezulu kweNqaku -Iinkampani ezininzi kakhulu ziyazingca ngento eziyenzayo endaweni yezibonelelo abazifumana kubathengi babo. Ayisiyiyo into oyenzayo ethengisayo; sisibonelelo esihenda umthengi ukuba athenge. Ngaba unika ithuba lokwenza izinto zibe lula? Ukufumana iziphumo kwangoko? Ukufumana iingcebiso simahla?
Cwangcisa iNdlela yokuGuquka -Izithuba zebhlog, indlela ihlala ifundwa, jonga i-CTA, ubhalise kwiphepha lokufika, kwaye uguqule. Indlela yakho eya kuguquko inokwahluka kodwa ukubona kunye nokucwangcisa indlela onqwenela ukuba abantu bayithathe kunye nomxholo wakho kuya kukunceda uyile ngcono kwaye uguqule ngakumbi ngesicwangciso sakho seFown to Action.
Vavanya ii-CTA zakho -Yila iinguqulelo ezininzi zee-CTA zakho zokuchonga ukuba yeyiphi eqhuba iziphumo ezingcono zeshishini. Inye kuphela ayonelanga-iinkampani ezininzi azithathi xesha lokubonelela ngezinye zoyilo, i-verbiage, imibala kunye nobukhulu. Ngamanye amaxesha isivakalisi esilula sigqibelele, ngamanye amaxesha inokuba sisipho sopopayi.
Vavanya iZibonelelo zakho Isilingo sasimahla, ukuhanjiswa simahla, isiqinisekiso sokwaneliseka esipheleleyo esiyi-100%, isaphulelo… kuya kufuneka ukuba ukhethe ukhetho lwezinto ezahlukeneyo zokuhenda ukwanda kwenguquko. Qiniseka ukuba ulinganisa ukusebenza ngokukuko kwezo zinikezelo ngokubhekisele kugcino lwabathengi, kananjalo! Iinkampani ezininzi zibonelela ngesaphulelo esithe xhaxhe phezulu ngaphambili kuphela ukulahlekelwa ngumthengi ekupheleni kwesivumelwano sabo.
Jonga enye infographic esabelana ngayo ngaphezulu Izinto ezenziwa kunye nezingamele zenziwe ngeeCall-to-Action eziSebenzayo.
tags: oopopayi gifumnxeba kwisenzobiza umbala wesenzobiza indawo yokusebenzabiza ubume bentshukumobiza ubungakanani besenzofowunela isenzo verbiagebiza amagama ezenzoctaAmaqhosha e-CTActa indawoubume be-ctaubungakanani be-ctacta amagama
Douglas Karr Sunday, August 7, 2016 Friday, August 12, 2016
Ukuhambahamba: Uhlalutyo lweXesha leXesha lokuSebenzisa iiFowuni
Ukufunyanwa kweDomain: Ulawulo lweShishini lweeaseti zeDomain
Meyi 5, 2015 kwi-9: 08 AM
Enkosi ngokwabelana ngeengcebiso ngephulo leCTA elisebenzayo. Ukukhetha ngokwenyani uyilo kunye nombala wephepha kubaluleke kakhulu kwiziphumo ezingcono. Ndilawule iphulo eliqela kwaye liyasebenza ngokwenene.
Jul 19, 2017 ngo-1: 52 PM
Esi sicwangciso sokurhweba nge-ebook sokwazisa nge-imeyile sinefowuni efanelekileyo yesenzo. Endaweni yesiqhelo "Ndifuna le" okanye "khuphela ngoku!". Yathimba ababukeli ngokumangalisa kwayo “HAMBA KAKHULU!”Isicatshulwa seCTA esineqhosha.
Ndiyithandile kuba kufanelekile kumxholo we-ebook (Sebenzisa intshukumo yamaxabiso ahambelanayo kwizitokhwe zamanye amazwe kunye nee-US ADRs ukuqikelela amaxabiso esitokhwe ngokuchanekileyo ngaphambi kokuvulwa kweemarike.) Kunye nabaphulaphuli bayo, ikakhulu abathengisi beemarike zesitokhwe kunye nabathanda. Yifumane Apha.